Varairidzi Vari Kuramwa Mabasa Votyisidzirwa Muzvikoro
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti nhengo dzaro dziri kutysidzirwa nemaDistrict Education Officer, ayo ari kupinda muzvikoro achiperekedzwa nevanofungidzirwa kuti vasori.
Zvinonzi maDistrict Education Officer aya, ari kutora mazita enhengo dzesangano iri, idzo dziri pakuramwa mabasa. Izvi zvinonzi zviri kuitika mumatunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland Central, Harare, Gweru, Masvingo neMatabeleland.
Asi sangano iri rinoti riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisatyisidzirwa uye kuti dzizivise mahofisi aro kana dzichinge dzashanyirwa nevanhu ava. Studio 7 yatadza kubata Gurukota rezvedzidzo, VaAeneas Chigwedere, kuti tyinzwewo divi ravo.
Varairidzi vave nemasvondo matatu vachiramwa mabasa vachida kuti mari dzavanotambira dzitangire pa$1.7 billion pamwedzi. Izvi zvinonzi zviri kukanganisa kufambiswa kwemabasa muzvikoro.
National Coordinator wePTUZ, VaOswald Madziwa, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti sangano ravo richatsvaga magweta kuitira kubatsira nhengo dzinenge dzashungurudzwa kana kutorerwa matanho.